के हस्तमैथुन गर्ने मानिस कमजोर हुन्छन् ? - Deshko News Deshko News के हस्तमैथुन गर्ने मानिस कमजोर हुन्छन् ? - Deshko News
के हस्तमैथुन गर्ने मानिस कमजोर हुन्छन् ?
यौन आनन्द प्राप्त गर्ने एक माध्यमध्य नै यौन अंगको आसपास घर्षण गराउनु हो ।मानिसले आफ्नो यौन अंगको घर्षण अरु कसैको यौन अंगमा गराए मात्र यौन आनन्द प्राप्त गर्छन् भन्ने होइन । सम्भोग गर्दा र हस्तमैथुन गर्दा यौन आनन्द प्राप्त गर्ने प्रक्रिया उस्तै हो । त्यसैले सम्भोग गर्दा हानि हुँदैन र हस्तमैथुन गर्दा हानि हुन्छ भन्न मिल्दैन ।
हस्तमैथुनले यौनइच्छाको दमनबाट हुने तनावबाट मुक्ति दिलाउँछ । तनावबाट मुक्त मानिस बढी सकारात्मक रूपमा सिर्जनशील हुन सक्छ र उसको स्मरण शक्तिसमेत बलियो बनाउँछ । यौन चाहना शान्त पार्न मद्दत पुर्याउने भएकाले कतिपययौन अपराधलाई कम गर्नको लागि सहयोग पुग्छ । आवश्यक गर्भधारण देहव्यापारीसँग यौनसम्बन्ध, यस्ता क्रियाकलापमा खर्च अुने तथा समय दुरुपयोगबाट पनि जोगाउँछ ।
अब हस्तमैथुन गर्दा कति शक्ति खर्च हुन्छ हेरौं । सामान्यत स् हस्तमैथुन गर्दा यस्तै ३ देखि ६ क्यालोरी प्रतिमिनेट खर्च हुन्छ । दौडँदा यस्तै १४ देखि १८ क्यालोरी प्रतिमिनेट, भर्‍याङ चढ्दा यस्तै १२ देखि १४ क्यालोरी प्रतिमिनेट खर्च हुन्छ भने पौडी खेल्दा यस्तै १० देखि १२ क्यालोरी प्रतिमिनेट खर्च हुन्छ ।
तुलनात्मक अध्ययनपछि थाहा पाइसक्नुभएको होला रु हस्तमैथुन एउटा विशेष शक्ति अर्थात क्यालोरी खर्च हुदैन् । यसरी लामो समयसम्म थकाइ लगाउने कारणहरूमा रक्तअल्पता, निराशपन, चिन्ता, खानासम्बन्धी एलर्जी, ह्दयरोग, मधुमेह, निदाएका बेला सास रोकिने अवस्था, थाइराइडले राम्रोसँग काम नगर्ने जस्ता कतिपय कारण हुन सक्छन् । यसमा तपाईंले हस्तमैथुनलाई दोष दिनुभन्दा चिकित्सकबाट जाँच गराउनु नै बेस होला ।
मुख्य बुझ्नुपर्ने कुरा हस्तमैथुनले बाहिर चर्चा गरिएजस्तो स्वास्थ्यसम्बन्धी हानी नोक्सानी पुर्याउँदैन् । प्रकृतिक यौन क्रियाकलाप यौन क्रियाकलापको उपचार गर्ने चलन रहेको छ । प्रशस्त खर्च गर्ने गराउने काम पनि हुन्छ । एजेन्सी